Ny tetikasanao mamorona rehetra dia manana vidiny ao amin'ny Fiverr | Famoronana an-tserasera
Angamba mbola mieritreritra ianao fa ampy taona vao manomboka orinasa. Na tsia, fa tsy manana hevitra mivaingana hanombohana azy ianao. Mety koa ny fahitanao ny tenanao anaty fatorana tsy azonao ialana. Ary amin'izany rehetra izany dia ampio fa tianao ny mamolavola, manamboatra programa sns. Ny tetik'asa rehetra ataonao dia tsy misy olona ary tsy misy tambiny ara-bola. Fiverr dia manala ireo teboka ireo ary mametraka anao tsara amin'ny asa aman-draharaha.
Fiverr dia sehatra serivisy mahaleo tena ho an'ny olona mamorona. Ary izany dia, miaraka amin'ireo asa rehetra eo amin'ny harato izay manangona vovoka, tsara kokoa ny mandray ireo andinin-tsoratra ireo hanitarana ny tohotrao amin'ity sehatra ity.
1 Ahoana ny fiasan'ny Fiverr?
2 Fahafantarana ny asanao
Ahoana ny fiasan'ny Fiverr?
Raha mila tetikasa ianao fa tsy hainao ny manomboka azy dia azonao atao ny mampiasa an'io tsena io hanakarama mpiasa. Ny fahitana ny piraofilina mifanaraka amin'ny zavatra ilainao dia azo atao noho ny fifaninanana lehibe misy. Saingy, raha mifanohitra amin'izay no anananao tolotra omena dia manjary mpivarotra manokana. Mivelatra ny serivisy, tsy vitan'ny famolavolana tranonkala na sary fotsiny. Misy sampana maro hafa koa asehonay anao eto ambany.
Ny marketing varotra
Fandikana sy fandikana: Izay ahafahanao mandika lahatsoratra, na amin'ny bilaogy na amin'ny fandaharam-pianarana ary na amin'ny boky na lafin-javatra toy ny 'Terms and fepetra'.
Lahatsary sy sary mihetsika
Mozika sy Audio
Orinasa sy fomba fiaina: Mamorona horonantsary viral, fizarana fampielezana / sidina, fanaovana fampisehoana sns.
Afaka mahita ireo sokajy rehetra ireo ianao ao amin'ny Fiverr sy ireo orinasa rehetra azonao atokisana. Ho anao ho mavitrika ary tsy ho iray intsony ao amin'ilay lisitra, dia tsy maintsy mifanandrify amin'ny vidiny ianao. Manaova tolotra mifaninana, asehoy ny fahaizanao sns. Ataovy ao an-tsaina fa misy olo-malaza sasany izay efa nahazo 'Grammys' mihitsy ary eo no mangataka asa.
Miankina amin'ny fanontaniana roa ny miady amin'ireo toetra ireo: ny fomba fanaovana dokambarotra ny tenanao sy ny fifaninanana vidinao.. Rehefa manomboka isika dia maniry ny hitombo haingana, fa raha mandroso am-pitoniana isika dia afaka mahatratra tanjona tsara kokoa dia tadidio izany.
Misoratra anarana, tonga mpamorona. Mamorona profil arakaraka ny fahaizanao sy ny fianaranao azonao momba ny asanao. Haharitra minitra vitsy monja izany, satria fampahalalana fantatrao momba ny tenanao izany. Ny toerana tokony hampiasanao fotoana bebe kokoa dia ny fahafantarana ny vidiny apetrakao amin'ny asanao. Omeo lanja ny ora iasan'ny tetikasa na ny asa. Tanjona fanatanterahana.
Fahafantarana ny asanao
Hanana naoty ho an'ny mpanjifanao ianao, izay amin'ny faran'ny fifandraisana ara-dalàna miaraka aminao no hanamarinan'izy ireo ny asanao. Raha nahafa-po, ny saina, ny hafainganana, sns. Fa azonao atao koa ny manome lanja ny asanao, alohan'ny hanakarama anao.
Ary, raha manokan-tena ianao ohatra, amin'ny fanaovana 'Templates for PowerPoint', dia ho azonao atao ny manombatombana azy amin'ny fizarana telo:
Ireo sokajy ireo dia miankina amin'ny tadiavin'ny mpanjifa. Raha misafidy ambaratonga fototra ianao dia handoa kely kokoa. Nefa ho vitsy ny zonao amin'izany. Ary koa asa tsotsotra kokoa, tsy ho saro-takarina izany satria fandoavambola kely lavitra. Ho fanampin'izay, amin'ny maha-mpamorona anao, azonao atao ny mametraka azy amin'ny tranokala varotra hafa ary mamorona mpanjifa bebe kokoa miaraka aminy maodely mitovy.
Ny fotoana hazakazakao dia miankina aminy ihany koa. Raha misafidy fonosana mahazatra ianao dia hanana fotoana bebe kokoa hanaovana izany satria asa sarotra kokoa io. Amin'ity tranga ity dia hanana zo manokana ihany koa ianao amin'ny fizarana vaovao ny vokatra. Satria io dia tsy azo antoka ho an'ny mpanjifa irery ihany. Raha ny fampisehoana ao amin'ny PowerPoint, Keynote, sns. Hanana fisafidianana slide hafa ianao arakaraka ny fonosana novidinao.
Raha misafidy ny fonosana premium ianao dia hampiasa manokana ilay tetikasa. Handoa vola bebe kokoa ianao, saingy tsy manam-paharoa. Ny mpamorona an'i Fiverr dia hanana fotoana bebe kokoa hamoronana azy satria ho tetikasa matanjaka sy feno kokoa izy io.
Ny safidy farany dia ny mangataka amin'ny mpamorona mba hanao izany ao anatin'ny fotoana fohy. Satria noho ny antony sasany, indraindray, mila asa iray andro iray manaraka. Avy eo ny mpividy dia tsy maintsy mandoa vola fanampiny ho an'ny serivisy mazava. Toy izany koa no miseho amin'ny sehatry ny mpampita hafatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ny tetikasanao rehetra dia manana vidiny ao amin'ny Fiverr